अमेरिकामा आदिकविको सम्झना - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
अमेरिकामा आदिकविको सम्झना
न्यू ह्याम्सायर । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास), न्यू ह्याम्सायर च्याप्टरले शनिबार एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । च्याप्टरले न्यू ह्याम्सायरको हुक्सेट लाइब्रेरीमा २०५औं भानु जयन्ती मनाएको हो । भानुभक्त आचार्यको तस्वीरमा माल्यार्पण गरी कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको थियो ।
शिक्षाविद् लक्ष्मणप्रसाद उपाध्यायको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको विशेष अतिथि अनेसासका केन्द्रीय महासचिव गोवर्धन पूजा रहेका थिए ।
भानुभक्त आचार्यको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा दीपा राई पुन, ईश्वरी भट्ट, सुशील नेपाल, पेमा छेवाङ शेर्पा, अनु शाह, गोवर्धन पूजा, हरिमाया अधिकारी लगायतले आ–आफ्नो रचना वाचन गरेका थिए । त्यसैगरी सुनिता गुरूङले गायन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सुनितालाई पूर्व च्याप्टरअध्यक्ष अग्नि पराजुलीले हार्मोनियममा साथ दिएका थिए ।
त्यस्तै, पत्रकार राजेश कोइरालाले नेपाली भाषा संरक्षण र महत्वबारे प्रकाश पारेका थिए भने प्रमुख अतिथि उपाध्यायले आदिकवि भानुभक्तका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि अनेसास महासचिव गोवर्धन पूजाले नेपाली भाषाका एकीकरणकर्ता भानुभक्त आचार्यलाई हामीले विदेशमा रहेर पनि दिनदिनै सम्झेको बताए । संस्थालाई सहयोग गरेको भन्दै शिवकुमार राई, डा. रुद्र अर्याल, शारदामाया भट्ट लगायतलाई सम्मानस्वरूप कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
संस्थाको उपाध्यक्ष हरिमाया अधिकारीको सभापतित्वमा सञ्चालित कार्यक्रममा थुप्रै संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
लस एन्जलसवासीले पनि सम्झिए
यसैबीच जुलाई १४, शनिबार अनेसास लस एन्जलस च्याप्टरले पनि भानुभक्तलाई सम्झेका छन् । च्याप्टरले भव्यसाथ विविध कार्यक्रम गरी २०५औं भानु जयन्ती सम्पन्न गरेका छन् ।
च्याप्टरका अध्यक्ष डन बहादुर कार्कीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अनेसासका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शान्तिराम ढकालले भानुभक्त आचार्यको संक्षिप्त परिचय र नेपाली भाषामा उनको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए ।
प्राध्यापक डा. दीपक सिंखडा, नेपाल सरकारका अवैतनिक महावाणिज्य दूत ऋषि ढकाल, पशुपतिनाथ बुद्ध मन्दिरका अध्यक्ष भक्त थापा, एनआरएन आईसीसी सदस्य तथा बौद्धिक संस्थाका संयोजक बलराम थापा लगायतले भानुभक्तको तस्वीरमा माल्यार्पण गरी कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको थियो ।
साथै कार्यक्रममा अनेसासका आजीवन सदस्य तथा श्री पशुपतिनाथ बुद्ध मन्दिरका गुरु प्राध्यापक आचार्य चुडामणि पाठकद्वारा लिखित कृति ‘अध्यात्म विज्ञान’को विमोचन गरिएको थियो । बुद्ध समाजका अध्यक्ष तथा अनेसास लस एन्जलस च्याप्टरका सचिव राम लामा तथा नेपाल सरकारका पर्यटन दूत रामेश्वर भण्डारीले सो पुस्तकबारे चर्चा गरेका थिए ।
त्यसैगरी वाणिज्य दूत ऋषि ढकालले यस्ता कार्यक्रमले नेपाली समाजमा भाषाको संरक्षण तथा साहित्यमा रुचि बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । कार्यक्रममा प्रकाश पाण्डे, सुशीला पाण्डे, राम लाम, संस्थापक अध्यक्ष गोकुल पौडेल, इन्दिरा त्रिपाठी र किरण थुलुङले आ–आफ्ना रचना वाचन गरेका थिए ।